Mpiray fizahan-tany ao Mekong miaraka amin'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mpiray fizahan-tany ao Mekong miaraka amin'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand
Miaraka amin'ny TAT, Mekong fizahan-tany dia namoaka fanentanana vaovao momba ny Mekong Moments mba hanazava ny fizahan-tany isam-paritra sy ny fahasarotana ara-temotra ao Thailand sy ny faritra hanomezana aingam-panahy ny fizahan-tany ao amin'ny GMS.
Tamin'ny alàlan'ny ezaky ny fiaraha-miasa avy amin'ny Birao Mpandrindra ny fizahan-tany ao Mekong (MTCO) sy ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand (TAT), lalantsara fitsangatsanganana vaovao sivy no nampiana tao amin'ny tranokalan'ny varotra sosialy Mekong Moments ho ezaka hanampiana amin'ny fampiroboroboana ireo harena miafina ao Thailand ao anatin'ny Greater Mekong Subregion (GMS).
Novokarin'ny Strategie Chameleon mpikambana ao amin'ny UNWTO, i Mekong Moments dia tanteraky ny rafitra fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina Destination Mekong ary ampiasain'ny rafitra fitantanana varotra sosialy ENWOKE. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny trangan'ny fizarana media sosialy, ny MTCO dia nandefa an-tsakany sy an-davany ity fampielezan-kevitra momba ny varotra mpanjifa maso ity mba hampiroborobo ny lalantsara tsirairay amin'ny fitsangatsanganana (miaraka amin'ireo traikefa 100 mahery hita ao anatiny) amin'ny anaran'ny TAT. Ireto misy lalana:
• Lalam-by amoron-tsiraka atsimo
• Lalan-dàlan'ny Mekong Discovery
• Lalana Atsinanana-Andrefana
• Zotra 8
• Làlan-kaleha vita amin'ny dite Mekong
• Làlan'ny vakoka avaratra
• Fitsangantsanganana amoron'ny renirano Mekong ao amin'ny telozoro volamena
• Ny làlana afovoan'ny Buddha Buddha
• Ny Projet Royal
Mipetraha ao amin'ny www.mekongmoments.com izao, ny tsirairay amin'ireo lalantsara dia manana tranokala natokana, izay manome ny mpitsidika ny fahitana lalina momba ny dia ankapobeny ary koa ireo traikefa mifandraika amin'izany - ny maro izay any Thailand. Mba hanampiana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandraisana andraikitra fizahan-tany lehibe kokoa izay manerana ny firenena rehetra ao amin'ny GMS, ny TAT dia niara-niasa tamin'ny MTCO mba hampiditra traikefa an-dalantsara maro isaky ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy (Laos, Myanmar, Kambodza, Vietnam, ary Sina). Ny làlana lavitra mitondra ny lohateny hoe 'Mekong Tea Caravan Trail', ohatra, dia misy traikefa misy temotra any Thailand, Laos, Myanmar, ary China.
“Ny fiaraha-miasa amin'ny [MTCO] sy ny Destination Mekong hamela ireo mpandeha an-trano sy iraisam-pirenena hizara ny zavatra niainany rehefa mandeha amin'ny làlan'ny lohahevitra misy firenena maro avy any Thailand, ary koa ny fitsidihana ireo Tetikasa Royal Thai dia tsy mifanaraka fotsiny amin'ny ezaky ny TAT hampiroborobo ny toerana faharoa , fa Mekong Moments dia mamela ihany koa ireo orinasa madinidinika any amin'ireny faritra ireny hanangana fahaiza-manao sy hitondra fiara », hoy Andriamatoa Kitsana Kaewtumrong, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Doka sy ny Fifandraisam-bahoaka.
Rehefa mitsidika pejy lalantsara iray ianao dia raisin'ireo mpitsidika latabatra misy ny tambajotra sosialy miangona miaraka amin'ny toerana sy traikefa mifandray amin'ny lalantsara. Ny atin'ny haino aman-jery tsirairay (eken'ny tenifototra mety) dia mampifandray ireo pejin'ny traikefa mifandraika amin'ny Mekong Moments, dia manome fampahalalana momba ilay traikefa ary koa rohy mankany amin'ireo fantsona famandrihana.
Ireo sivana haino aman-jery sosialy dia azo zahana ihany koa amin'ny 'Karazan-dehilahy mpitsangatsangana' valo samihafa - MIARAKA, MELAINA, MANARAKA, FOODIE, NATURAD, BUDGET, LUXURY, ary FIANAKAVIANA. Amin'ny fipihana ny iray amin'ireo sivana ireo, ny mpitsidika dia afaka mahita traikefa izay mifanaraka indrindra amin'ny fomba fitsangatsanganany. Ankoatr'izay, ny sehatra Mekong Moments dia mamela ny mpitsidika hikaroka bebe kokoa amin'ny alàlan'ny sari-tany iray azo ifandraisana izay voamarika amin'ny pinpoint azo tsindriana.
Vokatry ny fandefasana ity fampielezan-kevitra ity, efa ho 130 ny traikefa ananan'ny isam-batan'olona no nampiana tao amin'ny sehatr'asa miaina 10,000 XNUMX Mekong Moments hatreto. Azo zahana ny traikefa toy ny 'King Taskin Shrine' (Southern Coastal Corridor), 'Angkhang Nature Resort' (The Royal Projects), ary Sukhothai Historical Park (The Middle Path of Lord Buddha), manome antsipiriany bebe kokoa momba ny traikefa ankoatry ny atiny media sosialy mifandraika. Ny traikefa rehetra dia voamariky ny iray amin'ireo sokajy traikefa sivana dimy - DO, MOVE, STAY, SHOP, ary TASTE.
"Faly izahay miara-miasa amin'ny Fahefan'ny Fizahan-tany any Thailand [TAT] amin'ny fampisehoana ireo làlana misy firenena maro lohahevitra ao amin'ny Faritra Mekong, miainga any Thailandy," hoy ny talen'ny fahefana jeneraly MTCO Jens Thraenhart.
"Noho ny fahitan'ny TAT ny fanaparitahana ny mpitsidika haneho hevitra momba ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fisidinana ireo toerana faharoa dia faly izahay manohana ny paikady miaraka amin'ny sehatra aingam-panahy momba ny dia lavitra Mekong Moments mba hitondrana orinasa any amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany maharitra maharitra izay ampiasain'ny teknolojia ara-barotra sosialy ENWOKE."
Misokatra ny hotely misy marika COSI any Pattaya